Thwebula Agar.io 1.4.4 – Vessoft
Agar.io – okuthakazelisayo Arcade game for imincintiswano inthanethi nabanye abadlali. Umdlali uqala umdlalo njengoba cell encane, lapho eba futhi ukwanda ngobukhulu ukumuncwa izinhlayiya eziningi yokufakelwa enkundleni yomdlalo. Umgomo oyinhloko Agar.io iyona ukumuncwa amangqamuzana zabanye abadlali ukwandisa ubungako cell yakho siqu. In the Agar.io kukhona izinhlayiya prickly zobungako obuhlukahlukeneko okunikeza amaseli encane nge endlwaneni kusukela ezinkulu noma yokuchitha amaseli big ngesikhathi kutholana phezulu yizicucu amancane. Agar.io kwenza ukusebenzisa tricks ehlukahlukene wezindlela kanye amabhonasi ekhethekile Gameplay more okuthakazelisayo futhi ezifinyelelwe isikhundla okuholela ohlwini simo.
Ukuba khona amabhonasi kanye izicupho
The ukusetshenziswa of amakhono ezikhethekile
Amazwana on Agar.io:
Agar.io Ahlobene software: